Celine Dion ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးဝတ်ဆင်အမျိုးသမီးတစ်ဦးမဲပေး! - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » လူတွေ & ပုံစံမျိုးမှာနေထိုင် "Celine Dion ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးဝတ်ဆင်အမျိုးသမီးတစ်ဦးမဲပေး!
Celine Dion ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးဝတ်ဆင်အမျိုးသမီးတစ်ဦးမဲပေး!
အဆိုပါကွိဘက် diva မတ်မတ်အဆိုပါသာမန်ထက်အကျိုးကိုရရှိခဲ့ကြပါလိမ့်မယ်။ Céline Dion အဖွဲ့ကကွိဘက်အဆိုတော်အကောင်းဆုံးဝတ်ဆင်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး 2019 များ၏စာရင်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာ Instagram ကိုပေါ်ကြေညာခဲ့သည်။
လပေါင်းများစွာအဘို့, Celine Dion ဟာအစွန်းရောက်ပြောင်းလဲမှုစတိုင်အခြမ်းဖန်ဆင်းတော်မူပြီ။ Exit ကိုအရမ်းဆွဲဆောင်မှုရှိသော diva outfits မှာ Quebec အဆိုတော်အခုအဓိကဖက်ရှင်ဒီဇိုင်နာများ၏ collection များကိုပေါင်းဘော်ရောနှောဘယ်မှာချွန်ထက်ရူပနှင့်ရဲရင့်အဘို့ opts ။ အဆိုပါအဆိုတော်ယခု Vanity Fair မဂ္ဂဇင်းအားဖြင့်အကောင်းဆုံးဝတ်ဆင်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး 2019 များ၏အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များတွင်ပါဝင်သည်။
သူမ၏ Audacity နှင့်နေဆဲပိုပြီးသာမန်ထက်ရူပနှုတ်ဆက်ခဲ့သူမဂ္ဂဇင်း Vanity Fair နှင့်ပြည်သူ့အားဖြင့်ချီးမြှင့်တစ်ဦးကခေါင်းစဉ်, ။ အခါသမယများအတွက် Celine Dion ယခုအချိန်တွင်သူ၏စွဲရော်နယ်အောင်နိုင်ဗန် der Kemp ဒတျချြဖက်ရှင်ဒီဇိုင်နာကြီးကိုအတည်ပြုမဟုတ်သလိုဖိနပ်၏ 10 000 အားလုံးပိုင်ဆိုင်ငြင်းဆို, ဒါပေမယ့်အပေါ်တစ်ဦးဗီရိုကိုတည်ဆောက်လေပြီထားပြီးမကြောင်းရင်ဖွင့ တိုင်းတာ။
«ဒါဟာလျော့နည်းနေတဲ့လမ်းကြောင်းသစ်သဘောထားတွေရဲ့နှင့်လူသူတို့ကိုယ်သူတို့ဖော်ပြနှင့်ဖက်ရှင်မှတဆင့်ပျော်စရာရှိသည်ဖို့လွတ်မြောက်ခံစားရတယ်, ငါ့ကိုတို့ထိ"အကောင်းဆုံးဝတ်ဆင်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး 2019 ၏ဤစာရင်းတွင် Vanity Fair, Radhika ဂျုံးစ်၏အယ်ဒီတာပြောပါတယ်။
Roth စာရင်းဝင်သောသူတို့တှငျနှင့် Celine အတူ Chopra ကယောန, Zoe Kravitz, Rami မာလီခ်ပြောပြတယ်, Keanu Reeves, Elle Fanning သို့မဟုတ်လီနာ Waithe အပ်နှံလိုက်တယ်။ ဖက်ရှင်နဲ့သူအကွီဘက်၌သူ၏ခရီးစဉ်စတင်အကြောင်းချစ်သောသူကြယ်တစ်အရာ၌ခန့်ထား။
ကလူ - HGTV "တစ်ဦးကအလွန် Brady ပြန်လည်မွမ်းမံ" ၏4ဖြစ်စဉ်များအတွက်အိမ်သူအိမ်သားက "Brady စည်း" built ဘယ်လို
ရငျးနှီးသညျ့ရိုက်ကူးရေး၏မူလဓါတ်ပုံ - Meghan Markle ဖက်ရှင်အမှတ်တံဆိပ်စတင်နေသည်
Demi Moore ကဝတ်လစ်စလစ်ဖြစ်စေ: 1991 အတွက်၎င်း၏တစ်ဦးကဒဏ္ဍာရီ Vanity Fair အပေါ်ပြန်လာသည့်အခါ
ဗြာဒိတျကိတ် Middleton: တော်ဝင်မိသားစုကိုတစ်ဦးနူးညံ့သိမ်မွေ့သောအနေအထား & # 039 အတွက် Duchess left အဘယ်ကြောင့်;
အိန္ဒိယ: ဖြစ်သူ Amit Shah ကစစ်ပွဲ၏အကျိုးဆက်များ၏သတိပေး Ramayana ကိုးကား | အိန္ဒိယသတင်း
လူတွေ & ပုံစံမျိုးမှာနေထိုင်4,578